कम्यूनिष्टले लिएको एजेण्डा जनताले लिएको एजेण्डा हो : पुर्व शान्ति मन्त्री सत्या पहाडी – Vision Khabar
कम्यूनिष्टले लिएको एजेण्डा जनताले लिएको एजेण्डा हो : पुर्व शान्ति मन्त्री सत्या पहाडी
। ७ मंसिर २०७४, बिहीबार २२:३२ मा प्रकाशित
चुनावी कार्यक्रममा भाग लिन गृहजिल्ला जाजरकोट आएको मौका पारेर नेकपा माओवादी केन्द्रकी महिला नेतृ तथा पुर्व शान्ति मन्त्री सत्य पहाडी संग गरिएको कुराकानी संम्क्षेपमा उल्लेख गरेका छौ ।
देशमा वामगठवन्धन र नेपाली कांग्रेस विच चुनावी रस्सा कस्सी चलिरहदा जाजरकोटमा कस्तो छ ?
देशै भरिको महोल हेर्दा विगतमा हामी ६० प्रतिशत थियौँ । अहिले हामी स्थानीय निकायको चनावको डेटा हेर्दा अहिले हाम्रो अवस्था ९० प्रतिशतमा पुगेको छ । ६ नम्वर प्रदेश वाम गठवन्धनमय भईसकेको छ ।
६ नम्वर प्रदेशमा जित्ने आधार के छ त्यस्तो ?
हिजो यहाँ नेता मात्र मात्र होइन ,जनता पनि संगै यस राजनीतिक आन्दोलमा लागेकै कारण देशमा परिवर्तन आयो , जनयूद्ध,जनआन्दोलमा जुन खालको भमिका हामीले खेलेका छौँ , त्यसैले देशमा परिवर्तन आयो । यो सवै वामगठवन्धले त्यस्को संस्थागत रुपमा विकास र जगेर्ना गरिरहदा हामी अहिले यहाँ सम्म आएका छौँ । नेपालमा कम्यूनिष्टले लिएको एजेण्डा जनताले लिएको एजेण्डा हो र जनताको पुरै अधिकार दिने कुरा कम्यूनिष्टले नै गरे त्यसैले हाम्रो जित निश्चित छ । जाजरकोटको विकासका लागि मानव विकास क्रमको तथ्यंकको हिसाव हेर्दा जाजरकोट धेरै माथि आएको छ । हिजो जनताको अधिकार लेख्ने काम थियो , जनताको राजनीतिक आन्दोलन प्राप्त भएपनि अव समाज रुपान्तरणको अवस्थामा हामी आएका छौँ । उत्तर दक्षिण जोडुने भेरी करिडोरको काम जाजरकोट डोल्पामा भईरहेको छ । विद्युतको केन्दीय लाईन विस्तार भएको छ , वाटो पिच भयो , गाउँ गाउँमा सडक पुगको छ । पर्यटन क्षेत्रमा विकासका लागि कुशेमुसे पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि काम सुरु हु्ँदै छ । खानेपानि , विुद्युत सडक निर्माणका थपै काम शक्ति वस्नेतकै नेतृत्वमा भएका छन् । जनताको जीवनस्तर वदल्न का लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । रोजगारी सिर्जना , विकासले जनताको चेतना वदल्ने हाम्रो अभियान ,सपना हो ।
काम अनुसारको प्रचार कम भएको हो ?
हामीले जति काम गरेपनि हामीले कहिले पनि यस्तो गरेका छौँ भनेर भनेनौ भन्दैनौ पनि , किनकी हामीले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो हल्ला गरेर होईन । कसै कसैले सवै काम मैले गरे भन्दै वुजुवा राजतीतिज्ञले भनेको सुन्दा अनौठो लाग्छ । टुरिष्ट राजनीति गदैँ जाजरकोटको लाज लाग्दो कुरा गदै सवै आफै गरेको भनि झुटको खेति गरिरहेका छन् । जनतालाई अन्धकारमा राख्न चाहने , जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहरुले सवै हमीले गरेका हौ भन्दै गर्दा हामीले जनताको पहल कदमी भनेका छौ । जाजरकोटमा जुन विकासको लहर आएको छ त्यो सवै जाजरकोटी जनताको वलिदान र तपस्यले भएको हो । हामी जेल पर्नु पनि जनताकै अधिकारको लागि थियो ।
काम गर्ने तर स्वामित्व लिन नसक्ने परिपाटी कहिले सम्म ?
जाजरकोटमा एक्लै विकास कसैले गरेका छैन्न र होईन पनि । देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाईसकेको अवस्थामा लिडरले गरेन मैले गरे भन्नु कतिको जोहेज छ । जनताको सहयोग लिदै अहिले सम्मका काम हुँने गरेका छन् । झाडापखालको वेला पनि हामीले एकिकृत जनस्वास्थ्य अभियान चलाएर घर आँगनमा गएर औषधी गरेका थियौँ र राहत पनि वितरण गरेका थियो । विदेशको डलर ल्याएर हेलिकप्टर उडाएर सहेर हामीले गरेका थिएनौँ । व्यक्तिगत रुपमा हामीले जनतालाई ६ हजारका दरले क्षेतिपुर्ती दिएका थियौँ । मान्छेको लास माथि राजनीति गर्नुहुँदैन । जनताको लागि गरिएको काम राजनीतिक धर्म हुँन , प्रचार गरि फाईदा लिने ठाउँ होईन ।
अनुहार पुराना केही एजेण्डा पुराना केही नयाँ , अवको मुख्य काम के हो खासमा ?
ति एजेण्डाहरु केही दिर्घकालिन थिए केही छिटो समयमा गर्न सकिने खालका थिए । जस्तै भेरी पुल निर्माण , विूत लाईन विस्तार र ठाउँ ठाउँमा सञ्चार सेवा विस्तार छोटो काम थिए , र भए पनि । दिर्घकालिन योजनामा नलगाड जलविद्युत , जाजरकोट डोल्पा सडक, जाजरकोट जुम्ला सडक वन्दै छन् । जिल्लाको विकास गर्ने हामीले हो गछौँ पनि हल्ला नगरि काम गर्ने हो त्यति थाह छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु पर्ने भएमा ?
जनताको एजेण्डा लिएर हामी अहिले जनताको भोट मागी रहेका छौँ । म जेल पर्दा पनि जनताको पक्षमा सोच्ने गथे र अहिले पनि सोचिरहेको छु । सवैलाई मेरो अनुरोध के छ भने वामगठवन्धनलाई जिताउ । देशको स्थिर सरकार निर्माण गरि नयाँ नेपालको खाका लाई विकास मुखी परिणाम सहितको सम्वृद्धी रोज्यौ । हाँसी हतौडामा भोट हालि प्रतिनिधी सभा सदस्यका उम्मेदवार शक्तिवहादुर वस्नेत , प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्र १ का उम्मेदवार गणेसप्रसाद सिंहलाई र सुर्य चिन्हमा भोट हालि प्रदेश सभा सदस्य जाजरकोट क्षेत्र २ का उम्मेदवार करवीर शाहीलाई अत्यधिक मतले विजय गराऔँ र म पनि समानपाुतिकको उम्मेदवार भएकाले आँसी हतौडामा भोट हाली विजय गराउन सवै आम नागरिकलाई अनुरोध गर्दछु ।